‘ओलम्पिक खेल्ने सपना अधुरै रह्यो’ |
‘ओलम्पिक खेल्ने सपना अधुरै रह्यो’
प्रकाशित मिति :2017-09-15 10:22:45
तेक्वान्दो खेलकी चर्चित खेलाडी हुन् आयशा शाक्य । ३० वर्षीया आयशाले आफ्नो खेल जीवनमा थुप्रै राष्ट्रिय तथा अन्र्तराष्ट्रिय पुरस्कार जितिसकेकी छन् । सन् २००६ को १० औँ दक्षिण एसियाली खेलकुद सागमा रजतपदक, सन् २०१० को ११ औँ सागमा स्वर्णपदक लगायतका थुप्रै उपाधी जित्न सफल आयशा पछिल्लो समय के गर्दैछन् त ? तेक्वान्दो खेलाडी दीपक विष्टसँग प्रेम विवाह गरेकी आयशाकी ८ बर्षकी छोरी पनि छन् । उनै चर्चित खेलाडी शाक्यसँग महिला खबर संवाददाता सन्दिप विकले गर्नुभएको कुराकानी ।
अहिले गेम छैन । घरधन्दा मै व्यस्त छु । एउटा हाउस वाइफले गर्ने सबै काम गर्छु । यसबाहेक इन्टरनेशनल किन्डर गार्डेन भन्ने बच्चाहरुको स्कूल छ । त्यहाँ गेम सिकाउँछु ।
राष्ट्रिय तथा अन्र्तराष्ट्रिय रुपमै चर्चा कमाइसकेको तेक्वान्दो खेलाडी विवाहपछि एकाएक ब्रेक लाग्यो नि किन ?
म खेलबाट ब्रेक भएको छैन । हाम्रो समाजमा एउटा महिला सन्तानपछि मात्र पूर्ण हुन्छ भन्ने मान्यता छ । त्यो कारणले कम गरेकी हुँ । तर विवाहपछि पनि मैले थुप्रै गेमहरु खेले । मेडलहरु ल्याए । मलाई धेरै अवसर आएको छ । परिवारबाट पनि साथ पाएको छु ।
खेलमा कहिलेदेखि लाग्नुभयो ?
म सानैदेखि खेलमा खुब इच्छा राख्थे । जब म आठ वर्षकी थिएँ, त्यही बेलादेखि मैले टाइगन टु खेल्न सुरु गरे । त्यसभन्दा अघि एक वर्ष जति मैले जेम्न्याष्टिक सिकेको थिए ।
थुप्रै पुरस्कार जिति सक्नुभएको छ ? नेपालको नाम चिनाउनुभयो । खेल क्षेत्रमा लाग्ने प्रेरणा ?
म सानै उमेरदेखि खेलप्रति रुची राख्थे । खेल्थे पनि । मेरो छिमेकमा दिदीहरु भन्दा दाईहरु बढी थिए । उहाँहरु क्रिकेट, व्याटमिन्टन, वास्केटवल खेलिरहेको देखेपछि म पनि उहाँहरुकै पछि लागेर खेल्न थाले । बाबाले पनि मलाई गेममा इन्ट्रेष्ट रहेछ भनेर नजिकैको टाइगन्टु डोजाङमा भर्ना गराइदिनुभयो ।
त्यहाँ मेरै बाबाको साथी हुनुहुन्थ्यो ईश्वरमान बज्राचार्य । उहाँ मेरो पहिलो गुरु हुनुहुन्छ । उहाँले सिकाउन थाल्नुभयो । मेरो प्रेरणाको स्रोत बाबा हो । उहाँले मलाई प्रोत्साहन दिनुभयो, इन्करेज गर्नुभयो ।
खेल क्षेत्र सुरु गर्दा धेरै सपनाहरु थिए होलान् । पुरा हुन सक्यो त ?
सुरुमा त थिएन । सानै थिए । जब म खेल क्षेत्रमा संलग्न हुँदै गए । व्याकबेल्ड सम्म पुगे । थुप्रै प्रतियोगितामा सहभागि भए, जिते ।
पहिला खेल्ने रुचि मात्र थियो, पछि सपना ठूला–ठूला हुन थाल्यो । यो गेम खेल्ने, त्यो गेम खेल्ने भनेर । ठूलै सपना बोके । ओलम्पिकसम्म खेल्ने इच्छा थियो । तर त्यो खेल्न सकिएन । ओलम्पिक खेल्ने इच्छा अझै अधुरै छ । थुप्रै इच्छाहरु त पुरा भए तर कुनै इच्छाहरु अझै अधुरै छ ।
किन पूरा हुन सकेनन् ?
धेरै समस्याहरु भए । हाम्रो गेम एउटा टेक्निकल भन्दा पनि हाइट वइज गेमहरु हुन थाल्यो । जब ठूलो वइटमा खेल्न थाल्यो तब म भन्दा अग्ला अग्ला मान्छे आउने । जिती राखेपनि कारणवंश अग्लोको हाइटको कारणले गर्दा हार्न पुगेको अवस्था पनि आयो । त्यो एउटा कारण थियो । अरु पनि थुप्रै कारणहरु छन् ।
महिला भएर खेल क्षेत्रमा लाग्न संघर्ष त धेरै गर्नुभयो होला ? कतिको सहज थियो खेल क्षेत्रमा आउन ?
महिला दिदी बहिनीहरुलाई खेल लगायत कुनैपनि क्षेत्रमा लाग्न धेरै गाह्रो छ । पढाई बाहेक अरु क्षेत्रमा लाग्न धेरै नै गाह्रौ हुन्छ । झन् खेल क्षेत्र भनेको त एउटा फिजिकल्ली स्ट्रोङ चाइने कुरा हो । यस क्षेत्रमा आउन महिलाहरुलाई धेरै नै संघर्ष गर्नुपर्छ । त्यसमा म आफूलाई धेरै नै भाग्यमानी ठान्छु । किनकी मैले धेरै संघर्ष गर्नुपरेन । सायद ट्रेनिङमा मलाई धेरै दुःख भयो होला । तर अरु महिलाहरुले जुन संघर्ष गरे त्यो भन्दा मैले गरेको संघर्ष केही होइन भन्छु । किनकी मेरो परिवारबाट मलाई धेरै सपोर्ट थियो ।
अहिले गृहणी पनि हुनुहुन्छ ? खेल क्षेत्र सँगसँगै घर गृहस्थी सम्हाल्न कतिको सहज छ ?
म एकदम भाग्यमानी छु । किनकी श्रीमानको परिवारबाट पनि खेल क्षेत्रमा लाग्न सर्पोट छ । श्रीमान पनि एउटा खेलाडी भएको कारण ।
सबैले बुझ्नुहुन्छ । एउटा खेलाडी भएपछि के हुन्छ, घरमा कति समय दिन सकिन्छ भनेर । उसलाई के कति कुरामा छुट दिनुपर्छ भनेर सासु ससुरा सबैले बुझ्नु भएको छ । तर एउटा खेलाडी गृहणी भएपछि गाह्रो त अवश्य नै हुन्छ । घर गृहस्थी सम्हाल, आफनो गेम हेरे । मलाई परिवारको साथले नै त्यति असहज भएको छैन ।
एउटा महिला खेलाडीका लागि अवसर र चुनौतिहरु के के छन् ?
महिला खेलाडीलाई अवसर त धेरै छन् । तर महिलालाई अगाडी बढ्न परिवारको सहयोग धेरै चाहिन्छ । विवाहपछि श्रीमानको सहयोग । परिवारको सहयोग भयो भने कुनैपनि महिलाले अवसर गुमाउनुपर्दैन ।
पारिवारिक सहयोग विना गाह्रो छ । समाज महिलामैत्री छैन । परिवारको पनि छोरी यो क्षेत्रमा नगए हुन्थ्यो भन्ने सोच हुन्छ । एउटा महिलाको लागि मुख्य चुनौती भनेको यही हो । जब घरपरिवार र समाजको दृष्टीकोण सकरात्मक हुन्छ, महिलाका लागि धेरै सम्भावनाहरु छन् ।
खेल क्षेत्रमा फर्कन श्रीमानको सपोर्ट कतिको छ ?
श्रीमानको मलाई एकदम सर्पोट छ । उहाँ पनि खेलाडी भएको नाताले मलाई पूर्ण सर्पोट छ । अहिले पनि उहाँले तिमी खेल, तिमिलाई केही भएको छैन । तिमि खेल्न सक्छौ भनेर इन्करेज गरिरहनुुहुन्छ ।
मेरो भावी योजना अझै कसरी तेक्वान्दोमा मेडल जित्न सकौ‌ भन्ने छ । मैले थुप्रै योजना सोचेको छु । अहिले सम्म रिटायरमेन्ट लिएको छैन । अझैपनि गेम खेल्ने, मेडल ल्याउने इच्छा छ । मैले मेडल ल्याए भने देश र मेरो लागी पनि राम्रो हो । अर्को योजना प्रशिक्षक भएर नेपालमा धेरै राम्रा राम्रा खेलाडी जन्माउने ठूलो इच्छा छ ।